सुनको भाउ तोलाकै ७० हजार, यस्तो बेला किन्ने कि बेच्ने ?
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, २६ साउन
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँ नै कायम रह्यो । विगत एक सातामा प्रतितोला ५ हजार रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ ३ दिनयता करिब स्थिर छ ।
अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउँछन् । यस्तै, छिमेकी देश भारत काश्मीर विवादमा फसेका कारण पनि नेपालमा सुनको भाउ बढेको शाक्यले बताए ।
‘अमेरिका र चीनले एक अर्काको वस्तु आयातमा भन्सार वृद्धि गरिरहेका छन् । दुवै देशको यस्तो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लगानीकर्ता सुनतिर आकर्षित भएका छन् । यस्तै, काश्मीर विवादको कारण भारतीय मुद्रा कमजोर भएको छ । यसले पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढाउन सहयोगी भूमिका खेलेको छ,’ शाक्यले शिलापत्रसँग भने ।
के भइरहेको छ अमेरिका चीन व्यापारमा ?
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न भन्दै अमेरिकाले चिनियाँ उत्पादनको अमेरिका प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट अमेरिकामा हुने अयाातमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पहिलो लटमा २५ प्रतिशत र दोस्रो लटमा २५० अमेरिकी डलरमा २५ प्रतिशत नै भन्सार शुल्क बढाइदिएको छ ।
यति मात्रै होइन, ट्रम्प प्रशासनले आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुने गरी ३०० अर्ब डलरको आयातमा थप १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाले यसरी भन्सार वृद्धि गरेपछि चीनले पनि सोही अनुपातमा भन्सार दरमा वृद्धि गरेको छ ।
अमेरिका र चीनबीचको यस्तो व्यापार युद्धले विश्वभरका लगानीकर्ता डराएका छन् । डरकै कारण लगानीकर्ताले सुरक्षित क्षेत्रतर्फको लगानी बढाएका छन् । विश्वभरका लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा सुरक्षित लगानीको उपकरण नै सुन हो । सुनमा लगानी बढेपछि सुनको माग धेरै भएर विश्वभर नै सुनको मूल्य बढेको छ ।
काश्मीर पनि कारक
अघिल्लो साता मात्रै भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै काश्मीरलाई केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाएको छ । सोभन्दा अगाडि काश्मीर विशेष अधिकारसहितको पूर्ण राज्यको मान्यतामा थियो ।
भारतको यस्तो कदमपछि अमेरिकी डलरको तुलनामा उसको मुद्रा कमजोर भएको छ । नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थीर विनिमय दर कायम (पेग्ड) गरेको छ । त्यसकारण, अमेरिकी डलरसँग भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रा पनि डलरसँग कमजोर हुने र भारु बलियो हुँदा नेपाली मुद्रा पनि स्वतः बलियो हुने गर्छ ।
‘आइतबार विश्व बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔस १० अमेरिकी डलरले घट्यो, यसरी मूल्य घट्दा नेपाल प्रतितोला ४–५ सय रुपैयाँले सुनको भाउ घट्नुपर्थ्याे तर भारु कमजोर भएको कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेन,’ शाक्यले भने । आइतबार भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरसँग प्रतिडलर ८० भारतीय पैसाले कमजोर भएको छ ।
सुन बेच्दा ३ हजार नोक्सान
नेपाली व्यापारीले सर्वसाधारणसँग भएको सुन प्रतितोला ३ हजार रुपैयाँसम्म सस्तोमा खरिद गर्न थालेका छन् । यसअघि प्रतितोला १ हजार रुपैयाँ सस्तो सुन किन्ने व्यापारीले मूल्य अत्यधिक बढेपछि ३ हजार रुपैयाँसम्म सस्तोमा मात्रै सुन किन्न थालेका हुन् ।
बजारमा सुनको माग नै नभएकोले व्यापारीले सस्तोमा किन्न थालेका पूर्वअध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । सुनको मूल्य स्थिरता कायम गर्ने सरकारी निकाय नभएकोले व्यापारीहरुले आफ्नै बलबुतामा किन्ने गरेका कारण उपभोक्तालाई नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली बजारमा सुन किन्न मात्रै पाइन्छ, बेच्ने निकाय छैन, ग्राहकले किनेको सुन बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरुले व्यापारीलाई नै बेच्ने हुन् । अहिले बजारमा सुनको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएकोले कुनै पनि बेला फेरि ह्वात्तै घट्न सक्छ । यस्तो जोखिम व्यापारीले लिन सक्दैनन् त्यसैले उनीहरुले ग्राहकसँग प्रतितोला ३ हजार रुपैयाँसम्म सस्तोमा किनिरहेका छन्,’ शाक्यले भने ।
कतिपय व्यापारीले सुन अहिले राखेर ग्राहकलाई पछि पैसा लिन आउनुस् भन्नेसम्म पनि गरेका छन् ।
यो बेला सुन किन्ने कि बेच्ने ?
ग्राहकका लागि अहिले छनोटको सबैभन्दा कठिन विकल्प नै यही हो । सुनको मूल्य अझ बढ्ने अवस्था भएमा किन्न नसकिए पनि आफूसँग भएको सुन ‘होल्ड’ गर्दा ग्राहकलाई फाइदा हुन्छ । तर, केही दिनमा नै भाउ घट्यो भने अहिले बेच्नेले नै फाइदा गर्छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष शाक्य भने तत्काल सुनको भाउ घट्ने संकेत नमिलेको बताउँछन् ।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध तत्काल समाधान भए सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै निकै घट्ने उनले सुनाए । तर, यी दुई देशबीच तत्काल कुनै सम्झौता हुने संकेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले गरेका छैनन् ।
पूर्वअध्यक्ष शाक्य सुनमा लगानी गर्ने उदेश्यले खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन जरुरी भएको बताउँछन् । यस्तै, आवश्यक कामका लागि सुन खरिद गर्नेहरुले पनि आफूलाई चाहिएको न्यूनतम परिमाणको सुन मात्रै खरिद गर्नु अहिलेको उपयुक्त विकल्प भएको व्यापारीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०७६, ०३:२३:००
डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्य बढ्यो
ललितपुरमा साइकल लेन निर्माण सुरु
भेरी बबई आयोजना प्रभावितद्वारा मुआब्जा बढाउन माग